Ọnọdụ General | Law & More B.V.
gbasara Anyị » Ọnọdụ niile
1. Law & More B.V., nke e guzobere na Eindhoven, Netherlands (nke a na-akpọzi “Law & More”) Bụ ụlọ ọrụ na - akwụ ụgwọ dị obere, hibere n'okpuru iwu Dutch na ebumnuche nke ịme ọrụ iwu.
2. Ọnọdụ izugbe ndị a metụtara ọrụ niile nke onye ahịa, ọ gwụla ma ekwenyeghị na ederede ọzọ tupu ngwụsị nke ọrụ ahụ. Enweghi ike itinye ọnọdụ ọnọdụ izugbe ma ọ bụ ọnọdụ ndị ọzọ nke onye ahịa ji eme ihe na-edoghị anya.
3. Ọrụ niile nke onye ahịa ga-anabatacharị ma rụọ ya Law & More. Itinye akwụkwọ nke ederede 7: 407 paragraf nke 2 Dutch Civil Code ka edoghi ya anya.
4. Law & More na-arụ ọrụ dị ka usoro iwu nke Dutch Bar Association na, dị ka iwu ndị a si dị, na-agba mbọ ịghara ịkọwa ozi ọ bụla nke onye ahịa nyere na ọrụ ahụ.
5. Ọ bụrụ n’ihe gbasara ọrụ ndị enyere Law & More ndị ọzọ kwesịrị itinye aka na ya, Law & More ga-atụle ndị ahịa tupu oge eruo. Law & More ọ bụghị maka njehie nke ụdị ndị ọzọ a nwere ikike ịnabata, na-enweghị ndụmọdụ edere ede na nnọchite nke ndị ahịa, mmachi anya ga-adị na ndị ọzọ ndị otu a na-eme. Law & More.
6. Okwukwo oru obula di nkpa na ugwo a gha agha ugha n’okwu ahu n’okpuru ntuzi aka oru aka nke oru Law & More, na-abawanye site na deductible ngafe n'okpuru mkpuchi a. Mgbe, n’ihi ihe ọ bụla, a naghị akwụ ụgwọ n'okpuru mkpuchi mkpuchi ndị ọkachamara, ụgwọ ọ bụla dị na njedebe nke € 5,000.00. N'arịrịọ, Law & More nwere ike ịnye ozi na (mkpuchi n'okpuru) ọrụ mkpuchi ụgwọ ọrụ ọkachamara dị ka nke wepụtara Law & More. Ndị ahịa na-ere ahịa Law & More ma jigide Law & More enweghị mmerụ ahụ megide ebubo nke ndị ọzọ metụtara ọrụ a.
7. Maka arụmọrụ nke ọrụ, onye ahịa ji ụgwọ Law & More ego (gbakwunyere VAT). A na-agbakọ ụgwọ ahụ dabere na ọnụ ọgụgụ nke awa ọrụ agbagoro site na ọnụego elekere kwa oge. Law & More Onye nweere ikike idozi ego ya kwa oge.
8. Iwe maka ego akwụkwọ ọnụahịa ga-abụrịrị ihe a kpaliri ide ma nyefee ya Law & More n'ime ụbọchị iri atọ dechara ụbọchị akwụkwọ ọnụahịa, ị ga-anabata akwụkwọ ọnụahịa ahụ kpamkpam na enweghị ngagharị iwe.
9. Law & More nọ n'okpuru Nchịkwa Ego Mpụga na Nchịkwa Ego Nwepu Onye Ọchịchị Dutch (Wwft). Ọ bụrụ na ọrụ ekesara n'ime oke Wwft, Law & More g'esi dua onye ahia aka. Ọ bụrụ na azụmahịa (ezubere) iche na-adịghị ahụkebe n'etiti onodu nke Wwft pụtara, mgbe ahụ Law & More iwu ji mkpesa nke a na Ngalaba Nchịkwa Ahụike Dutch. A naghị ekpughere ndị ahịa ụdị akụkọ a.
10. Iwu Dutch metụtara mmekọrịta dị n'etiti Law & More na onye ahịa.
11. N'ọnọdụ nke esemokwu, ụlọ ikpe Dutch na Oost-Brabant ga-enwe ikike, na nghọta Law & More ikike ka edobe esemokwu n'ụlọ ikpe nke ga - enwe ikike ma ọ bụrụ na emeghị ụdị nzuko a.
12. ikike ọ bụla nke onye ahịa ikwu ihe megidere Law & More, ga-alaghachi n'ihe omume ọ bụla n'ime otu afọ mgbe ụbọchị nke ọre ahịa matara ma ọ bụ nwee ike ịmara na ịdị adị nke ikike ndị a.
13. Akwụkwọ ọnụahịa nke Law & More ga-ezigara onye ahịa ya site na email ma ọ bụ site na akwụkwọ ozi mgbe niile ma kwụọ ụgwọ ịkwụ ụgwọ ga-ewere ọnọdụ n'ime ụbọchị 14 mgbe ụbọchị akwụkwọ ọnụahịa ahụ dara, na-ada nke onye ahịa dị na ndabara ma kwụọ ụgwọ ịkwụ ụgwọ ndabara maka 1% kwa ọnwa, na-enweghị ọkwa ọ bụla achọrọ . N'ihi ọrụ rụrụ ọrụ site na Law & More, enwere ike itinye akwụkwọ ego nwa oge n'oge ọ bụla. Law & More tozuru oke ịrịọ ụgwọ maka nkwalite ụgwọ. Ọ bụrụ na onye ahịa akwụọ ụgwọ akwụkwọ ọnụahịa ahụ n’oge, Law & More O ruuru ya ịkwụsị ọrụ ya ozugbo, na-akwụghị ụgwọ ịkwụ ụgwọ ihe ọ bụla sitere na ya.